Adobe Photoshop | को साथ हातले बनाएको शीर्षक र बनावट संयोजन गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपको साथ शीर्षक र बनावट संयोजन गर्नुहोस्
जुडित मर्सिया | | Photoshop
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने बनावटको साथ शीर्षक सिर्जना गर्नुहोस् वा तस्विरहरु पनि तपाइँको शीर्षकहरु मा एक रचनात्मक स्पर्श दिन को लागी, पढ्न जारी राख्नुहोस्, हामी तपाइँलाई कसरी फोटोशप प्रयोग गरेर यसलाई सजीलै प्राप्त गर्ने बताउनेछौं।
अक्षरहरू आफैंले बनाएको बनावटसँग मिल्दछ, इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिन्छ वा सबै प्रकारको छविहरूसँग। यो ट्यूटोरियलमा हामी यसलाई व्यक्तिगत स्पर्श दिन सिक्नेछौं हाम्रो पदहरूमा।
1 हस्तनिर्मित बनावट
2 तहहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्
3 कुन फन्ट सबैभन्दा उपयुक्त छ?
यो धेरै चाखलाग्दो छ आफ्नै बनावट सिर्जना गर्नुहोस् म्यानुअल्ली, हामी क्रेयन्स, रंगीन पेन्सिल, पेन्ट, पेस्टल वा कुनै ड्राइंग उपकरण प्रयोग गर्न सक्छौं। राहतहरू स्क्यान गर्न सकिन्छ र यस तरीकाले हामी पाउँछौं बनावट ग्राफिक रूपमा लागू गर्नुहोस् हाम्रो दृश्य स्रोतहरुमा।
पहिलो कदम हो बनावट सिर्जना गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस्। जब हामीसँग यो स्क्यान हुन्छ हामी यसलाई Adobe Photoshop को साथ खोल्न अगाडि बढ्छौं। याद गर्नुहोस् कि कुनै पनि छविले मात्र गर्दैन, गुण न्यूनतम हुनु पर्छ ताकि हामीसँग पिक्सेल छैन।
हामी एक बनाउँछौं पाठको लागि नयाँ तहहामी के चाहन्छौं लेख्न सक्छौं। दिमागमा राख्नुहोस् कि पत्र गाढा छ, हामी अधिक बनावट प्रयोग गर्न सक्छौं। जब हामीसँग टेक्स्ट हुन्छ हामी यसलाई इच्छित स्थितिमा राख्छौं।
तहहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्
प्रभाव लागू गर्नु अघि हामीले गर्नै पर्छ तहहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। तसर्थ, छवि वा बनावट तह पाठ तहभन्दा माथि हुनुपर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो सबै पाठ कभर गर्नुहोस्.
अर्को, छवि तह चयन संग, हामी माथि मेनुमा जानेछौं र यो मार्ग अनुसरण: तह - क्लिपिंग मास्क सिर्जना गर्नुहोस्। हामी तुरुन्तै प्रभाव प्राप्त गर्नेछौं। हामी छविलाई पाठको माध्यमबाट सार्न सक्दछौं जब सम्म हामीले चाहेको ठाउँ प्रदर्शन हुँदैन।
कुन फन्ट सबैभन्दा उपयुक्त छ?
सबै चीज हामी खोजिरहेका परिणाममा निर्भर गर्दछ, तर हामीले पहिले नै भनेझैं मोटो र उत्तम साइज। एउटा चाल भनेको वजन "बोल्ड" वा "एक्स्ट्राबल्ड" छनौट गर्नु हो। केहि चाखलाग्दो फन्टहरू निम्न हुन सक्छन्:
लुसिडा ब्राइट (सेरिफ)
परिणाम एकदम आकर्षक छ र कुनै श doubt्का बिना, व्यक्तित्व को एक धेरै ल्याउँछ हाम्रो डिजाइन गर्न। तिनीहरू प्रत्येक अक्षरमा फरक बनावट लागू गर्न सक्दछन्। त्यहाँ विकल्पहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशपको साथ शीर्षक र बनावट संयोजन गर्नुहोस्
एक डिजाइन परियोजना को लागी बजेट
Loremizer को साथ कुनै वेबसाइटको पाठलाई Lorem ips मा रूपान्तरण गर्नुहोस्